साइकलमा घुम्ने हो ? भाडामै पाइन्छन्
बिनोद आचार्य काठमाडौं, चैत २४
स्वदेशी पर्यटकमाझ पनि साइक्लिङ गर्ने चलन बढेको पाइन्छ। साइक्लिङको कल्चर पछिल्लो समय बढेर गएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
यद्यपी सडक मैत्रीपूर्ण भएमा राजधानीमा साइक्लिङ गर्ने क्रम निकै बढ्ने र त्यसले पर्यटन क्षेत्रको विकासमै टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायीको बुझाई छ। काठमाडौंका सडक साइकलमैत्री छैनन्। जसले गर्दा यहाँ आउने पर्यटकले साइकलमा घुम्न चाहे पनि यतिबेला सडक बाधक बन्ने गरेको छ।
अर्कोतर्फ अझै पनि नेपालीमा साइकल प्रतिको बुझाइमा आमुल परिवर्तन नआएको साइकल चढ्नेहरुको बुझाई छ। साइकल चढेरै कलेज जाने तथा साइक्लिङ गर्न रुचाउने काठमाडौँका एलिन भट्टले मानिसमा साइकलप्रतिको बुझाइ गलत रहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘अझै पनि प्राय मानिस कम आम्दानी हुनेहरू मात्र साइकल चढ्छन् भन्ने ठान्छन्।’ तर समयसँगै युवा पुस्ताको सोच भने बदलिँदै गएको उनी बताउँछन्। साइकलको यात्रा स्वास्थ्यको हिसाबले लाभदायक, मनोरञ्जनात्मक तथा शानको विषय रहेकोे उनको बुझाइ छ।
नेपालमा जाइन्ट, कमेनसल, ट्रेक, मार्टिन, केटिएम जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका साइकलहरु किन्न पाइन्छन्। यस्ता साइकलको मूल्य २५ हजारदेखि ४ लाखसम्म पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
तर छोटो अवधिका लागि साइक्लिङ गर्न चाहनेलाई भाडामा पनि साइकल उपलव्ध गराउन थालिएको छ। साइकल किनेर भन्दा कुनै प्रयोजनको लागि भाडामा लिएर प्रयोग गर्नेहरुको संख्या धेरै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
ठमेलस्थित पेडल स्पोर्टका व्यवसायी आदर्श महर्जनका अनुसार साइकलको प्रकार हेरेर प्रति दिन ४ सय देखि ३५ सयसम्मको दरमा भाडामा दिइन्छ। उनका अनुसार यसरी साइकल भाडामा लिएर जानेहरुमा १६ देखि ३५ वर्षका उमेर समूहका मानिसहरु ज्यादा हुने गर्छन्।
ठमेलकै इटिसी नेपालका अर्का व्यापारी राकेश मर्हजनले पछिल्लो समय किनेर भन्दा भाडामा लगेर साइक्लिङ गर्ने युवा पुस्ताको संख्या बढेको बताए। व्यवसायीका अनुसार साइकल भाडामा लैजानुअघि पुरै पैसा वा सोही बराबरको धरौटी भने बुझाउनुपर्छ। नेपालीको हकमा नागरिकता वा विद्यार्थी परिचयपत्र तथा विदेशीको हकमा भने पासपोर्ट त्यही राखिन्छ।
भाडामा लगेको अवधि सकिएपछि बुझाएर धरौटी, पासपोर्ट वा नागरिकता फिर्ता लिन सकिन्छ। साइक्लिङका लागि गोदावारी, सुन्दरीजल, शिवपुरी, ककनी, चोभार, चिसापानी, कुलेखानी, ह्वाइट गुम्बा लगायातका स्थानलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा लिने गरिन्छ।
केही नेपाली तथा विदेशीले भने अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, मुस्ताङ, लगायातका स्थानसम्म पुग्न समेत साइकल लाने गर्छन्।
के छन् साइकल चढ्दाका फाइदा ?
साइकललाई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै लाभदायक मानिन्छ। साइकल चलाउँदा प्रशस्त शारीरिक अभ्यास हुने भएकाले यसले मुटु, मांशपेसी र हाडजोर्नीका साधारण समस्याबाट बचाउँछ भने कार्डियो भास्कुलर फिटनेसलाई बढाउने गर्छ।
यसले शरीरको तौल बढ्न नदिने, मोटोपनामा कमी ल्याउने, शारीरिक र मानसिक थकान हटाउने र अरू धेरै शारिरीक फाइदा पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। केही समयअघि फिनल्यान्डमा भएको अनुसन्धानले दैनिक ३० मिनेट साइकल चलाउनेहरूलाई मधुमेह हुने सम्भावना अरूभन्दा ४० प्रतिशत कम हुने गरेको पत्ता लगाएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँको जाममा गन्तव्यमा पुग्न पनि सहज साधनका रुपमा साइकललाई लिइन्छ।
साइकल किन्नु अघि वा किनी सकेपछि ध्यान दिनु पर्ने कुरा
झम्सिखेलमा रहेको इपिक माउण्टेन बाइकका अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार साइकल किन्दा त्यसको बनावट, ब्राण्ड, साइज, आफ्टर सर्भिस जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
उनको भनाइमा आफ्नो उचाइ वा वजन अनुसार आफूलाई सुहाउँदो साइकल किन्नुपर्छ। उचित हेलमेटको प्रयोगका साथै सर्भिसिङ, पार्टपुर्जाको उपलब्धताका विषयमा जानकार हुनु पर्दछ भने साइकल चढ्नु भन्दा अघि गियर, बे्रक आदि कसरी चलाउने भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ।
हलुका साधन भएकाले साइकल चोरी हुने संभावना पनि ज्यादै हुन्छ। साइकलको फ्रेमलाई कुनै वस्तु (खम्बा, रुख, रेलिङ आदिसँग) जोडेर लक लगाउनु बुद्धिमानी हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
साइकल लेन निर्माणको सुरुवात
काठमाडौंको सडक साइकलमैत्री छैन। साइक्लिङ गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सडकको समस्याले गर्दा काठमाडौंमा साइकल चलाउनेको संख्या ज्यादै न्यून छ। युरोपका धेरै देशमा साइकल चढ्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। विकसित देशहरुमध्ये डेनमार्कलाई सबैभन्दा धेरैले साइकल चढ्ने देशका रुपमा लिइन्छ।
संसारका विकसित सहरहरूमा साइकल यात्रीका लागि बेग्लै साइकल लेन बनाइएको हुन्छ। बढ्दो प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिङ आदीका कारण पनि साइकललाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो।
विश्वका धेरै देशमा साइकल यात्राका लागि सडकमा छुट्टै बाटोको व्यवस्था गरिँदा नेपालमा सुरुआत भने आरम्भ भएको छ।
काठमाडौँमा तिलगङ्गादेखि एअरपोर्ट सिनामङ्गलसम्म डेढ किलोमिटर साइकल बाटो निर्माण भइरहेको छ। कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म १० किमी, माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म ३ किमी, माइतीघरदेखि भद्रकालीसम्मको ६०० मिटर, कालीमाटीदेखि बल्खु १ किमी, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालदेखि बालुवाटारसम्म ३ किमी, बालाजुदेखि बाइपाससम्मको १ किमी गरी करिब २० किलोमिटर सडकमा छुट्टै साइकल लेन निर्माण भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २८, २०७३, १०:५८:४०